အလုပ်နှင့်ဘဝ ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် နည်းလမ်းကောင်း (၁၁) မျိုး - ONE DAILY MEDIA
အလုပ်နှင့်ဘဝဟန်ချက်ညီရန်မလွယ်ကူပါဘူး။တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကွဲလွဲနေတဲ့ ဦး စားပေးကိစ္စတွေကိုဘယ်အချိန်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရုန်းကန်နေရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ ကိုအချိန်အများကြီးပေးပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုထိခိုက်စေတာ ဒါမှမဟုတ် မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေလက်လွတ်ရတာမျိုးများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ဝါသနာတွေကိုပဲလုပ်ရတာက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြေဖျောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအတွက်သင်ကဟန်ချက်ညီဖို့ကို ပိုအာရုံစိုက်ပြီး နေ့စဉ်ဘ ၀ ရဲ့မတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့ပိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ် ။ အလုပ်နဲ့ဘ ၀ ဟန်ချက်ညီမှု ၊ အလုပ်နဲ့ဘဝပေါင်းစည်းမှုကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာကို Young Entrepreneur Council အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမေးခဲ့တယ်။ ဒီမှာသူတို့ကဘာပြောလဲ ဆိုတာကို တင်ပြပေးပါမယ်။
အလုပ်နှင့်ဘဝပေါင်းစည်းမှုဟာ အလုပ်နှင့်ဘဝဟန်ချက်ညီမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတူတဲ့ အရာတွေကိုသီးခြားထားဖို့ကြိုးစားတာထက်အဲဒါနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းဖို့နည်းလမ်းရှာတာ ပိုကောင်းပါတယ်။။ အိမ်မှအလုပ်ကိုလည်း အနည်းငယ်လုပ်ပါ ။ ပြင်ပအလုပ်ဝတ္တရားများကိုလည်း အလုပ်အချိန်၌လုပ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များနှင့်ပြင်ပအလုပ်ကို ဟန်ချက်ညီကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာပါ။ဒါဟာ သင့်အတွက်အဆင်ပြေမယ့်နေ့တစ်နေ့ကို ဖန်တီးဖို့တာဝန်တွေကိုချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်နဲ့ဘဝပေါင်းစည်းမှုကိုသင်အောင်မြင်သလားဆိုတာကိုတိုင်းတာဖို့တစ်နေ့တာရဲ့အချိန်တစ်နာရီကို မင်းဘယ်လိုအသုံးချလိုက်လဲ ။ မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မင်းအနာဂတ်နဲ့ မင်းအလုပ်ကိုပေါင်းစည်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုပျင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလိုမတွေးရပါဘူး။
အလုပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဘ ၀ ဟာ လုံးဝသီးခြားအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အသက်ရလာလေ ယခင်ကထက် ပို၍ အလုပ်တာဝန် များလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကဏ္ဍများကိုရောယှက်လာပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပြီးပြည့်စုံသောဘ ၀ ကို ဦးတည်သောပန်းတိုင်တစ်ခုကို စိတ်ထဲထားခြင်းဖြင့်အလုပ်နှင့်ဘဝပေါင်းစည်းခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကဏ္ဍအားလုံးတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိစေရန် အလုပ်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အလုပ်လုပ်ရမည့်အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
(၄) ခွဲခြားရန် မကြိုးစားပါနှင့်
အလုပ်နဲ့ဘဝက သက်သက်စီဆိုတဲ့အယူအဆကတကယ့်ကိုစိတ်ကူးဟောင်းတစ်ခုပါ။ လူတိုင်း ပုံမှန် ၉ နာရီမှ ၅နာရီအတွင်း အလုပ်လုပ်ရတာခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ် ။ ယနေ့ခေတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် မတူညီသောဘဝရှုထောင့်များဟာ အလုပ်နဲ့ထပ်တူကျနေတတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာ လိုက်လျောညီထွေရှိရန်နှင့် သင်၏အားလပ်ချိန်များတွင် အလုပ်၀င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်ကိုလက်ခံရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏နေ့ရက်ကိုစိန်ခေါ်ကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲထားပြီး မိနစ် ၃၀-၄၅ တွင်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ဤတာဝန်ကိုပြီးမြောက်ပြီးနောက် ပျော်စရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ၊ လမ်းလျှောက်ပါ၊ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အပန်းဖြေပါ ။ ပြီးရင်အလုပ်ပြန်လုပ်ပါ။
သင်ဟာပြည့်စုံတဲ့အလုပ်နဲ့ဘဝပေါင်းစည်းမှုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ရင်မနက်ခင်းနိုးတာနဲ့ သင်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေရတာကို သတိရပြီး သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအပြည့်အဝချစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ထိုဝါသနာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အလုပ်နှင့်ဘဝကိုစနစ်တကျရောစပ်ပါလိမ့်မယ်။
—Nicole Munoz, Nicole Munoz Consulting, Inc
ရုံးခန်းမှာ အချိန်ပြည့်ထိုင်ရတာကိုဘယ်သူမှမခံစားချင်ပါဘူး။ နေ့ရက်တိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်ကို မိမိနဲ့ အတူသယ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ခံစားချက်ကိုကြိုက်ကြပါတယ်။ နေရာတိုင်းနှင့်အချိန်မရွေး ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ကူညီပေးသော မိုဘိုင်းနည်းပညာနှင့်ဆော့ဝဲများကို အကျိုးရှိစွာသုံးပါ။
တစ်ချို့လူတွေက ရုံးခန်းလိုပုံစံမျိုး၊ အဖွဲ့ လိုက်လုပ်ကြပါတယ် ။ အခြားသူတွေကအခြားတစ်နေရာမှာသီးသန့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ နေလိုကြပါတယ်။ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တာက မင်းပိုအာရုံစိုက်ဖို့ကူညီနိုင်မလား ? ခရီးသွားနေစဉ် ရော ? မင်းရဲ့အဆင်အပြေဆုံးစတိုင်ကို ရွေးပါ။လူတွေဟာသူတို့ပျော်တဲ့အခါပိုအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။
(၉) ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်များထက် ရလဒ်ကိုဦးစားပေးပါ
တစ်နေ့ကိုဘယ်နှစ်နာရီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာကအဲဒါရဲ့အဆုံးမှာမင်းဘယ်လောက်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့လဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့အချိန်ပေးတာလဲ ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်နေလဲဆိုတာထက် အဲဒီ့အချိန်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ပါ။
(၁၀) လိုအပ်မှုများကို ညှိနှိုင်းပါ
လူအချို့ကအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံရန်မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ လိုအပ်တာမှန်သမျှအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတဲအခါမှာတောင် ဝါသနာပါရာအလုပ်တွေအတွက်တစ်နေ့တာမှာ နာရီတွေကျန်ပါ‌သေးတယ်။ အလုပ်နဲ့ဘဝပေါင်းစည်းမှုကိုအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် မျှော်မှန်းချက်တွေကိုနည်းနည်းညှိဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်က အလုပ်အတွက်အချိန်ပို ပိုပေးသင့်တဲ့နေမှာ ပိုပေးပြီး နောက်မှပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မည့်နေ့များတွက် နောက်မှပြင်ဆင်ပါ။
အလုပ်နှင့်ဘဝဟန်ချက်ညီမှုပေါင်းစပ်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှု သို့မဟုတ် အလုပ်များခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကစားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ အလုပ်နှင့်ဘဝပေါင်းစည်းမှုရရှိရန် ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားသည့် အလေ့အကျင့်လိုအပ်ပါတယ် ။ သင့်အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းပြီးအလုပ်ကဘ ၀ ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့မရှုမြင်သင့်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။
One Daily Media Copyright © 2021ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်နှင့် pageတွင်တင်ထားသော မည်သည့်သတင်းကိုမှ တခြား pageနှင့်website ပေါ်တွင် ကူးယူခွ